पत्रकार अग्रपंक्तिमा परेनन् | Nagarik News - Nepal Republic Media
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा खट्ने जनशक्तिलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर सधैं अग्रपंक्तिमा काम गर्ने पत्रकारलाई सरकारले अग्रपंक्तिमा राखेको छैन । किन राखिएन भन्ने विषमया कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले स्वास्थ्यकर्मीले मात्र सिधै कोरोना संक्रमितसित जुधेर काम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई अग्रपंक्तिमा राखिएको बताए ।
पत्रकारलाई किन राखिएन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उप्रेतीले आगामी दिनमा छलफल हुने जानकारी दिए ।
प्रकाशित: ९ माघ २०७७ ०६:५३ शुक्रबार
कोभिड–१९ खोप पत्रकार